Labo walaalo ah oo ku kala adkaadey kursi Doorashada Aqalka Hoose ee G/w/galbeed.
Raysalwasaare Kheyre Oo Kormeeray Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Deegaano Hoostaga Maamulka Puntland oo Diyaarado Duqeyn ka Geysteen,iyadoon Wali La Ogayn Khasaaraha.
Tagaasidii FIAT-124ka ee Talyaaniga laga keeni jirey kuwee bedeley?mase taqaan sababta?.
Doorashada sanadka danbe ka dhici doonta Kenya oo laga cabsi qabo Rabshado dhaca.
Waxaa jirta cabsi laga qabo rabsho dhacda xilliga doorashada guud ee Kenya sanadka dambe. Dadka Kenyanka ah ayaa wali aad uga cabsi qaba inay dhacdo rabshad la mid ah tii Kenya ka dhacday 2007-2008 kadib markii doorashadii madaxweynenimo lagu murmay. In ka badan kun qof ayaa la ogsoon yahay in...
G/Sool iyo Sanaag oo dhaqnkoodu Hambalyo u direen M/weynaha dawlada F.Soomaaliya Max’d C.Farmaajo.
Qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee deegaannada Sool iyo Buuhoodle ayaa hanbalyo iyo dardaaran u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo. Madax-dhaqameedkan oo ku sugan halka lagu magcaabo Higlo-ka-dhacday oo ka tirsan magaalada Buuhoodle oo xiisad colaadeed ka taagnayd maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa ay sheegeen in ay...
Dalka Kenya oo burcadda internetku ka dhaceen 39 Million halka dacwad loo heysto nin lagu eedeynayo.
Nin ku taqasusay arimaha la xiriira tiknolojiyadda ayaa dacwad lagu oogay, waxaana lagu eedeynayaa in $39 milyan oo dollar uu ka xaday laanta canshuuraha ee Kenya (KRA). Alex Mutungi Mutuku, oo 28 sano jir ah, ayaa ku eedeysan in gallay khiyaano dhinaca Internet-ka, kaddib markii uu xaday lacag malaayiin doolar...
Askeri Ugandes ah oo ay AL-shabaab soo bandhigeen kadib weerar ay hore ugu qabsadeen.
Al-shabaab ayaa kusoo bandhigtay muuqaal fiidiyow ah askari ka tirsan Ciidanka Uganda ee AMISOM, kaasoo ay Sannad ka hor ku Qabsadeen Weerar ay Sannadkii hore ku qaadeen saldhig ay ciidankan ku lahaayeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Askarigaan oo magaciisa ku sheegay Massasa M.Y. ayaa muuqaalka lagu soo bandhigay...
Isbitaalka tacliimiga ah ee Jaamacadda Banaadir oo billaabey hawlo bulsho deeq ah.
Isbitaalka tacliimiga ah ee Jaamacadda Banaadir oo ku yaalla degaanka KM13 ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah u howlgalay, iyadoo xaflad Furitaanka Isbitaalka lagu daahfurayna lagu qabtay xarunta Isbitaalkaas. Waxaa munaasabadan ka qeyb galay maamulka Jaamacadda Banaadir, dhaqaatiir, arday, Xildhibaano iyo mas’uuliyiin ka kala socday heyaddo ay ka...
Jaaliyadda Soomaalida Ku nool OTTAWA Dalka Canada oo iska ururiyey 100,000 Dolar si loogu Caawiyo Dadkii Qaraxu Saameeyey.
Somalida ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa isugu yimid kulan baroor diiq ah oo lacago loogu aruurinayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii asbuucii hore ka dhacay magaalada Muqdisho , isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 300 oo qof. Qaraxan ayaa si dareen leh waxa uu u wada taabtay dhamaan...
Waqooyiga Kuuriya oo Xayiraado Cusub ay kusoo Rogtey Qaramada Midoobey.
Golaha Amaanka ayaa cod buuxa ku meel mariyey in xayiraado adag la saaro Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah tijaabadii dhawaan ay ku samaysay gantaalaha ballistigga. Qaraarka qabyada ah ee Qaramada Midoobay waddo waxaa ka mid ah in hoos loo dhigo shidaalka uu dalku dibadda u dhoofiyo 90%. Shiinaha iyo Ruushka...
Dawlad goboleedka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Maamul goboleedka Galmudug oo heshiis kala saxiixdey.
Kaddib Wadahadallo ay maalmihii u dambeeyay Jigjiga ku lahaayeen madaxweynaha maamulka Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed iyo Dhigiisa Dowlad-deegaanka Soomaalida-Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa lagu Guuleystay in ugu dambeyn ay maanta madaxda heshiis kama dambeys ah ka gaaraan shaqaaqooyinkii ka dhacay soohdinta labada maamul u dhexeysa. Wadahadallada labada dhinac ayaa intii...
Ciidamadda Kenya oo Gebi ahaanba Burburiyey Dhismihii ay Shirkadda Hormuud Ku laheyd Deegaanka Dhamase ee Degmada Ceelwaaq.
Saraakiisha gobolka Gedo ayaa ku eedeeyay ciidamada Kenya in ay burburiyeen xaruntii Isgaarsiinta Hormuud Telecom ee deegaanka Dhamase oo qiyaastii 60KM u jira degmada Ceelwaaq. Col. Aadan Xirsi Rufle oo ka tirsan Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in ciidamada Kenya ay miinooyin ku xireen xaruntan, isla markaana ay gebi...
Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya Hadlliye oo ka jawaabey Go’aanka Mareykanka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya, C/salaan Hadliye Cumar, ayaa sheegay in ay ka xun yihiin go’aanka uu Madaxweynaha Mareykanka toddobo dal, oo Somaliya ku jirto uu kaga mamnuucay dalkaasi. Donald Trump, ayaa maalintii Jimcaha saxiixay awaamiir uu dadka u dhashay dalalkan kaga mamnuucayo in ay yimaadaan Mareykanka. Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliya, ayaa...